Macalinka Barca Muxuu Ka Yiri Guushii Chelsea, Bandhigii Leo Iyo Dembele & Dareenkiisa Wareega 8-da %
Macalinka Barca Muxuu Ka Yiri Guushii Chelsea, Bandhigii Leo Iyo Dembele & Dareenkiisa Wareega 8-da
Tababaraha kooxda kubada cagta Barcelona, ninka lagu magacaabo Ernesto Valverde, wuxuu ka hadlay guushii ay Camp Nou uga gaareen dhigooda Chelsea, kadib markii ay soo dhamaatay ciyaartaas, isagoona sheegay inay ku farax-san yihiin, Lionel Messi iyo Osman Dembele ayaa ka shaqeystay Blues, islamarkaana kala qeybsaday saddexda gool oo ay kaga soo takhaluseen Chelsea, waxaana Leo Messi uu ciyaartaan ka dhaliyay Labo gool oo caaqibo weyn lahaa.
Guushaan ayaa keentay in Barcelona ay usoo baxdo wareega Sideed dhamaadka ee Champions League, waxaana Valverde uu daboolka ka qaaday inay rajeynayaa inay sii wataan bandhigoodan, marka ay gaaraan wareega xiga.
“Messi wuxuu weerarkeena ka dhigay mid fiican, mar walba wuxuu ahaa mid wanaagsan,” ayuu Valverde kulanka kadib usheegay warbaahinta.
“Wuxuu na dareensiiyay raaxo badan, mar walba waa ciyaaryahan go’aamiya kulanka, wuxuuna waqti walba abuuri karaa halis sidaas darteeda weerarkeena ayuu ka dhigay mid adag oo wanaagsan,” ayuu raaciyay
Bandhigiisa Osman Dembele ayuu ka yiri: “Waxaa lagu qasbay isaga inuu si adag ushaqeeyo, waxaana uu ahaa mid si fiican noo caawiyey.
“Wuxuu joogay meel walba oo garoonka kamid ah – Sergio Basquets oo qabay Jaalo ayuu caawiyay, marka si fiican ayuu ushaqeeyay.
“Wuxuu naga caawiyey in aanan wax gool nagala dhalin, wuxuuna ahaa mid shaqo badan oo wanaagsan noo qabtay,” ayuu hadalkiisa kusoo gaba gabeeyay Valverde.
Kulanka soo aadan, waxayna Bluagrana ay la dheeli doontaa dhigeeda Atletic Bilbao, waana ciyaar ka tirsan horyaalka La Liga, ee wadanka Spain – Kulankaan oo dhici doona maalinta Axadda ah, waxaad kala second doontaa natiijadiisa Laacib.so.
Barcelona vs ChelseaChampions LeagueDembeleMessi
Kooxaha England waa kuwa ugu lacagaha badan dunida,waase kuwa ugu liita tartamada kooxaha kale
Lionel messi oo Goolkiisii 100-aad re Champion-ka , Imisa Kullan Ku Dhaliyay